पौडेल र सिटौलाबीचको अलग–अलग/के होला पौडेल–सिटौला सम्बन्ध ?| Nepal Pati
के होला पौडेल–सिटौला सम्बन्ध ?
काठमाडौं । अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सन्छ’, केही समयअघि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाप्रति लक्षित गर्दै सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए । कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पौडेल र सिटौलाबीच अविश्वास कायम रहेको देखिन्छ ।
पार्टीको १३ औं महाधिवेशनबाटै पौडेल र सिटौलाबीच अविश्वास बढेको हो। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रो हार बेहोरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका र पार्टी सञ्चालन शैलीलाई लिएर उनीहरू एउटै कित्तामा आइपुगेका थिए।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको आइतबार सम्पन्न चुनावबाट यी दुई नेताबीच अविश्वास पुनरावृत्ति भएको महसुस कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन्।
एसोसिएसनको चुनावमा पौडेल र सिटौला पक्षबाट छुट्टाछुट्टै प्यानल मैदानमा आए। आआफ्नो प्यानल जिताउन दुवै नेता खटिए पनि।
सिटौलापक्षीय योगेन्द्र अधिकारीको प्यानलले जितेपछि यी दुई नेताबीचमा कस्तो सम्बन्ध होला? कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी एउटै घटनाबाट सम्बन्धमा बदलाव नआउने दाबी गर्छन्।
कानुन व्यवसायीको चुनावमा संस्थापनइतर पक्षबाटै पौडेल र सिटौलाबीचको अलग–अलग प्यानल हुनुमा संस्थापन पक्षको कमजोर उपस्थितिलाई केसीले कारण ठानेका छन्।
‘संस्थापन पक्षसँग प्रतिस्पर्धा भएको भए हामी एउटै प्यानल बनाएर अघि बढ्थ्यौं, त्यस्तो अवस्था नदेखिएको र व्यावसायिक संस्था भएकाले पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिऊँ भन्ने भयो,’ केसीले भने, ‘संस्थापनइतर पक्षमै अविश्वास खडा भयो भन्ने अुनमान गलत हो।’
पौडेल र सिटौलाबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न केसीकै घरमा कैयौंपटक बैठकसमेत बसेको थियो। १३ औं महाधिवेशनमा देउवा, पौडेल र सिटौलाबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
पहिलो चरणमा ५१ प्रतिशत नआएपछि दोस्रोपटक सबभन्दा बढी मत ल्याउने देउवा र पौडलबीचको प्रतिस्पर्धामा सिटौलाले देउवालाई सघाए, जसबाट पौडेल र सिटौलाबीच ‘पानी बाराबार’ को स्थिति थियो।
संसदीय निर्वाचनपछि सिटौला र केसी पार्टी सञ्चालनमा सभापति देउवाको कार्यशैली र भूमिकाको आलोचना गर्ने मुद्दामा एकै ठाउँमा आइपुगे। केसी १३ औं महाधिवशेनमा देउवा पक्षबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार थिए।
१४ औं महाधिवेशनसम्म संस्थापनइतर पक्ष एकजुट भएर जान पौडेल र सिटौला दर्जन बढी बैठक बसेका छन्। दुई नेतालाई एक ठाउँमा ल्याउन थुप्रै असमझदारी चिर्दै अघि बढेको केसी सुनाउँछन्।
‘दुई नेताबीच विगतलाई लिएर बेलाबखत असमझदारी नदेखिएको होइन,’ केसी भन्छन्, ‘हामी १४ औं महाधिवेशनसम्मै संयुक्त रूपमै अघि बढ्छांै। यसले केही असर गर्दैन।’
यसअघि पौडेल र सिटौला समूहले शिक्षक संघ, कर्मचारी युनियन र ट्रेड युनियन कांग्रेसमा मिलेरै संयुक्त प्यानल अघि सारेको थियो।
सिटौला पौडेलसँग मिल्दा पार्टीको तल्लो निकाय र पंक्तिमा संस्थापन पक्ष कमजोर बनेको थियो। यसपटक पहिलाको जस्तो एकता देखिएन।
‘आफ्नो छाताभित्र सिटौला आइसकेपछि आफूले भनेको उम्मेदवारलाई मान्नुपर्छ भन्नेमा पौडेल देखिए, बलियो र प्रभावशाली हुँदा पनि सानो गुट भएकै कारणले उम्मेदवार नै हुन नपाउने हो त भन्ने सिटौलामा पर्‍यो,’ पौडेल पक्षीय एक नेताले भने, ‘यसले दुई नेताबीच केही अविश्वास पक्कै सिर्जना गरेको छ।’
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पछिल्लो यो घटनाले पौडेल र सिटौलाबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपना आउन सक्ने संकेत गर्छन्। ‘यसअघि मिलेर जाने र अहिले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार दिँदा केही असर पर्ने देखियो,’ सिटौलानिकट रहेका पौडेलले भने, ‘यही नै अन्तिम भने होइन।’ कान्तिपुरबाट